Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာ၊ ကိုးကန့်နှင့် ဒီအေဘီ ပေါ်လစီ
မင်းပြောပုံအရဆိုရင် ဘင်ဂါလီတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးခိုးဝင်လာရင်​တောင်မှအားလုံးကို နိုင်ငံသားပေးရတော့မယ်ပုံဘဲ​ ... အဲဒါဆိုထိုင်းနိုင်ငံထဲရောက် နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃သန်းကျော် ကရော ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်တောင်းဆိုလို.ရမလား ??? အဲ့ဒီလိုတောင်တိုင်းထိုင်းကသူ.နိုင်ငံသားတွေအဖြစ်သတ်မှတ်မလား ??? (အဲဒီလိုသာတောင်းဆိုရင်ထိုင်း​ကမြန်မာတွေအားလုံးကိုမောင်း​ထုတ်ပြစ်မှာကြိမ်းသေပါတယ် ) .. ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုလို.အထင်ကြီးခဲ့မိပါတ​ယ် ... အခုမှ ငပေါကြီးမှန်းသိတယ် :)
့ခွေးသား မင်းနာမည် ပြောင်းလိုက် ချီးသီး လို့။ ရခိုင်လူထုကို ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ကောင်
မအေလိုး မိုးသီးဇွန်... ခွေးမသား. လုပ်စား။ ငါလိုးမသားလို့မဆဲတော့ဘူး ငါလုပ်တဲ့မိန်းမမင်းလိုကလေးမွေးမှာစိုးလို့။ တိုင်းရင်းသားချင်းကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ကောင်။